သားသားမီးမီးလေးတွေကို ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကျွေးရတာအရမ်းခက်နေလား | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း ကလေးတွေကို ဟင်းသီးဟင်းရွက်စားဖို့ကျွေးရတာအရမ်းခက်ပါတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကလည်း ရောဂါကိုကာကွယ်ပေးတဲ့အစာအုပ်စုထဲမှာပါပြီးတော့ ကျန်းမာရေးအတွက် အရေးကြီးတော့မကျွေးလို့ကလည်းမရ ကလေးကိုကျွေးဖို့ကလည်းခက်နဲ့ မိဘတွေ အတွက်ကတော့ တကယ်အခက်ကြုံရပါတယ်။
သြစတျေးလျ အစားအစာဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းအရ အသက် ၈ နှစ်အောက်ကလေးတစ်ယောက်ကတစ်နေ့ကို ဟင်းသီးဟင်းရွက် ၂ ခွက်ကနေ ၄ခွက်ခွဲလောက်စားသင့်တယ်လို့ အကြံပြုထားပါတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကျွေးရခက်တဲ့ကလေးတွေကို ဘယ်လိုကျွေးမလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
1.မိဘတွေကိုယ်တိုင်က စံနမူနာကောင်းအနေနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုစားဖို့လိုပါတယ်။
ကလေးတွေဆိုတာက မိဘတွေကိုအတုယူတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးတွေကိုဟင်းသီးဟင်းရွက်နှစ်သက်စေဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကစားပြတာပါ။ မိသားစုထမင်းဝိုင်းမှာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အနည်းဆုံး ၂ ခွက်လောက်အမြဲပါသင့်ပါတယ်။ ဒါမှသာကလေးတွေအနေနဲ့လည်း ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုမစိမ်းဘဲနဲ့ စားကျင့်ရပြီးကြိုက်သွားမှာပါ။
ကလေးတွေကတော့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကို စစားချင်းချင်းမှာ မကြိုက်ဘဲငြင်းကြမှာပါပဲ။ ကလေးငြင်းလိုက်ရုံနဲ့မိဘတွေက လက်မလျှော့သင့်ပါဘူး။ ထမင်းကျွေးတဲ့အခါတိုင်းမှာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကို အရသာရှိအောင်ချက်ပြုတ်ပြီးကျွေးကြည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ ကလေးအချို့အတွက် အစားအစာအသစ်တစ်မျိုးကို လက်မခံခင်မှာ ၁၀ ကြိမ်လောက်ကျွေးကြည့်ဖို့လိုပြီးတော့ သူတို့ကြိုက်သွားဖို့အတွက်ဆိုရင် နောက်ထပ် ၁၀ ကြိမ်လောက် ထပ်ပြီးကျွေးကြည့်ဖို့လိုပါသတဲ့။ ဒီတော့ ကြိုးစားပြီးကျွေးကြည့်မယ်ဆိုရင် နောက်ဆုံးမှာ ကလေးက ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြိုက်သွားမှာပါ။
Enervon-C Kidz 1
ကလေးဟင်းသီးဟင်းရွက်စားတိုင်းမှာ ‘ရွှေဖရုံသီးတွေ၊ မုန်ညင်းတွေစားနေတယ်လိုက်တာ မေ့မေ့သမီးလေးကချစ်စရာလေး’ စတဲ့ချီးကျူးစကားလေးတွေဆိုပေးမယ်ဆိုရင် ကလေးတွေအနေနဲ့ နောက်ထပ်စားချင်စိတ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒီလိုချီးကျူးပေးရမယ်ဆိုပေမယ့်လည်းပဲ ရည်ရွယ်ချက်က ကလေးကို ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြိုက်အောင်လုပ်ရမှာဖြစ်လို့ ကလေးကကြိုက်လို့စားတာဖြစ်ရပါမယ်။ ချီးကျူးခံချင်လို့စားတာမျိုးမဖြစ်အောင် သတိထားဖို့လိုပါတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်စားလို့ ချီးကျူးသလို မစားလို့ဆိုပြီးတော့ အပြစ်ပေးတာမျိုးတော့မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဒီလိုဒဏ်ပေးခြင်းအားဖြင့် ကလေးက ဟင်းသီးဟင်းရွက်အပေါ်မကောင်းမြင်သွားပါလိမ့်မယ်။
ပြီးတော့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်စားအောင် ဆုပေးဒဏ်ပေးစနစ်ကျင့်သုံးလို့မရပါဘူး။ ဥပမာ ဒီမုန်လာဥလေးစားရင် ရေခဲမုန့်ကျွေးမယ် လို့ပြောလိုက်ရင် ကလေးက ဟင်းသီးဟင်းရွက်စားချင်တာထက် ရေခဲမုန့်စားချင်လို့စားတာဖြစ်ပြီးတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာထက် ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတာတွေကိုပိုစားချင်စိတ်ဖြစ်စေသလို အစားအလွန်အကျွံလည်းစားမိစေပါတယ်။
ကလေးအနေနဲ့သူကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပါဝင်ပြီးပြင်ဆင်ထားရတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပါတဲ့အစားအစာတွေကိုပိုပြီး စားချင်စိတ်ရှိမှာပါ။ ဥပမာဆိုရင် ကလေးကို ညစာအတွက်ဘာအရွက်ဝယ်မလဲကိုယ်တိုင်ရွေးဝယ်ခိုင်းတာမျိုး၊ ချက်ပြုတ်တဲ့အခါမှာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုဆေးခိုင်းတာ၊ လှီးဖြတ်ပြီးသားလေးတွေကိုအိုးထဲထည့်ခိုင်းတာမျိုးတွေကို ပါဝင်ကူညီစေခြင်းအားဖြင့် စားချင်စိတ်ကိုအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကလေးက ဓားတွေလိုမျိုးချွန်ထက်တဲ့အရာတွေကိုအန္တကင်းကင်းကိုင်နိုင်တဲ့အရွယ်ရောက်ရင် ကူပြီးတော့ လှီးခိုင်းဖြတ်ခိုင်းလို့ရပါတယ်။
သွားရည်စာအနေနဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတာတွေကျွေးမယ့်အစား ဟင်းသီးဟင်းရွက်လေးတွေကိုစားချင်စဖွယ်လုပ်ကျွေးမယ်ဆိုရင်လည်း ကလေးတွေက ဗိုက်ဆာလာတဲ့အခါမှာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်စားကျင့်ရသွားပါလိမ့်မယ်။
Enervon-C Kidz 2
အရသာ၊ ပုံစံ၊ အရောင်မျိုးစုံရှိတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်လေးတွေကိုရွေးကျွေးပါ။ ကလေးကဒီလိုဆိုရင်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားလာမှာပါ။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အသစ်တစ်ခုခုကျွေးတဲ့အခါမှာ သူကြိုက်တဲ့အစားအစာနဲ့အတူကျွေးတဲ့အခါမှာလည်းကလေးအာရုံစိုက်မှုနည်းစေပါတယ်။ ပြီးတော့ အရသာရှိဖို့လည်းလိုပါသေးတယ်။ အင်တာနက်ကနေကြည့်ပြီးတော့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်လေးတွေကို မျက်နှာပုံစံ၊ အရုပ်ပုံစံလေးတွေပုံဖော်ပြီးကျွေးရင်လည်း ကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကိုပိုရစေနိုင်ပါတယ်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ချည်းပဲကျွေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကို ကလေးကြိုက်တတ်တဲ့ဟင်းထဲမှာရောပြီးချက်ကျွေးတာကလည်း နည်းတစ်မျိုးပါပဲ။
ဖြစ်နိုင်ရင်တော့လည်းကလေးက ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုကြိုက်လာအောင် သူ့ရဲ့မူလပုံစံအတိုင်းကျွေးတာကတော့အကောင်းဆုံးပါ။
သားသားမီးမီးတို့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်မျိုးစုံစားပြီးတော့ ရောဂါတွေကင်းစင်ကြပါစေ။
တဈခါတဈလတေော့လညျး ကလေးတှကေို ဟငျးသီးဟငျးရှကျစားဖို့ကြှေးရတာအရမျးခကျပါတယျ။ ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှကေလညျး ရောဂါကိုကာကှယျပေးတဲ့အစာအုပျစုထဲမှာပါပွီးတော့ ကနျြးမာရေးအတှကျ အရေးကွီးတော့မကြှေးလို့ကလညျးမရ ကလေးကိုကြှေးဖို့ကလညျးခကျနဲ့ မိဘတှေ အတှကျကတော့ တကယျအခကျကွုံရပါတယျ။
သွစတြေးလြ အစားအစာဆိုငျရာစညျးမဉျြးအရ အသကျ ၈ နှဈအောကျကလေးတဈယောကျကတဈနကေို့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျ ၂ ခှကျကနေ ၄ခှကျခှဲလောကျစားသငျ့တယျလို့ အကွံပွုထားပါတယျ။ ဟငျးသီးဟငျးရှကျကြှေးရခကျတဲ့ကလေးတှကေို ဘယျလိုကြှေးမလဲဆိုတဲ့ နညျးလမျးကောငျးလေးတှကေိုပွောပွပေးခငျြပါတယျ။
1. မိဘတှကေိုယျတိုငျက စံနမူနာကောငျးအနနေဲ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျကိုစားဖို့လိုပါတယျ။
ကလေးတှဆေိုတာက မိဘတှကေိုအတုယူတတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကလေးတှကေိုဟငျးသီးဟငျးရှကျနှဈသကျစဖေို့အကောငျးဆုံးနညျးလမျးတဈခုကတော့ မိဘတှကေိုယျတိုငျကစားပွတာပါ။ မိသားစုထမငျးဝိုငျးမှာ ဟငျးသီးဟငျးရှကျအနညျးဆုံး ၂ ခှကျလောကျအမွဲပါသငျ့ပါတယျ။ ဒါမှသာကလေးတှအေနနေဲ့လညျး ဟငျးသီးဟငျးရှကျကိုမစိမျးဘဲနဲ့ စားကငျြ့ရပွီးကွိုကျသှားမှာပါ။
2. ကလေးကဟငျးသီးဟငျးရှကျမစားခငျြလို့ငွငျးနရေငျလညျး မိဘတှကေလကျမလြှော့လိုကျပါနဲ့။
ကလေးတှကေတော့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျကို စစားခငျြးခငျြးမှာ မကွိုကျဘဲငွငျးကွမှာပါပဲ။ ကလေးငွငျးလိုကျရုံနဲ့မိဘတှကေ လကျမလြှော့သငျ့ပါဘူး။ ထမငျးကြှေးတဲ့အခါတိုငျးမှာ ဟငျးသီးဟငျးရှကျကို အရသာရှိအောငျခကျြပွုတျပွီးကြှေးကွညျ့ပေးဖို့လိုပါတယျ။ ကလေးအခြို့အတှကျ အစားအစာအသဈတဈမြိုးကို လကျမခံခငျမှာ ၁၀ ကွိမျလောကျကြှေးကွညျ့ဖို့လိုပွီးတော့ သူတို့ကွိုကျသှားဖို့အတှကျဆိုရငျ နောကျထပျ ၁၀ ကွိမျလောကျ ထပျပွီးကြှေးကွညျ့ဖို့လိုပါသတဲ့။ ဒီတော့ ကွိုးစားပွီးကြှေးကွညျ့မယျဆိုရငျ နောကျဆုံးမှာ ကလေးက ဟငျးသီးဟငျးရှကျကွိုကျသှားမှာပါ။
3. ကလေးကဟငျးသီးဟငျးရှကျစားတဲ့အခါတှမှော ခြီးကြူးစကားဆိုပေးပါ။
ကလေးဟငျးသီးဟငျးရှကျစားတိုငျးမှာ ‘ရှဖေရုံသီးတှေ၊ မုနျညငျးတှစေားနတေယျလိုကျတာ မမေ့သေ့မီးလေးကခဈြစရာလေး’ စတဲ့ခြီးကြူးစကားလေးတှဆေိုပေးမယျဆိုရငျ ကလေးတှအေနနေဲ့ နောကျထပျစားခငျြစိတျပျေါလာပါလိမျ့မယျ။
ဒီလိုခြီးကြူးပေးရမယျဆိုပမေယျ့လညျးပဲ ရညျရှယျခကျြက ကလေးကို ဟငျးသီးဟငျးရှကျကွိုကျအောငျလုပျရမှာဖွဈလို့ ကလေးကကွိုကျလို့စားတာဖွဈရပါမယျ။ ခြီးကြူးခံခငျြလို့စားတာမြိုးမဖွဈအောငျ သတိထားဖို့လိုပါတယျ။ ဟငျးသီးဟငျးရှကျစားလို့ ခြီးကြူးသလို မစားလို့ဆိုပွီးတော့ အပွဈပေးတာမြိုးတော့မလုပျသငျ့ပါဘူး။ ဒီလိုဒဏျပေးခွငျးအားဖွငျ့ ကလေးက ဟငျးသီးဟငျးရှကျအပျေါမကောငျးမွငျသှားပါလိမျ့မယျ။
ပွီးတော့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျစားအောငျ ဆုပေးဒဏျပေးစနဈကငျြ့သုံးလို့မရပါဘူး။ ဥပမာ ဒီမုနျလာဥလေးစားရငျ ရခေဲမုနျ့ကြှေးမယျ လို့ပွောလိုကျရငျ ကလေးက ဟငျးသီးဟငျးရှကျစားခငျြတာထကျ ရခေဲမုနျ့စားခငျြလို့စားတာဖွဈပွီးတော့ ကနျြးမာရေးနဲ့ညီညှတျတဲ့အစားအစာထကျ ကနျြးမာရေးနဲ့မညီတာတှကေိုပိုစားခငျြစိတျဖွဈစသေလို အစားအလှနျအကြှံလညျးစားမိစပေါတယျ။
4. ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှခေကျြပွုတျတဲ့နရောမှာ ကလေးကိုပါဝငျစပေါ။
ကလေးအနနေဲ့သူကိုယျတိုငျကိုယျကပြါဝငျပွီးပွငျဆငျထားရတဲ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျပါတဲ့အစားအစာတှကေိုပိုပွီး စားခငျြစိတျရှိမှာပါ။ ဥပမာဆိုရငျ ကလေးကို ညစာအတှကျဘာအရှကျဝယျမလဲကိုယျတိုငျရှေးဝယျခိုငျးတာမြိုး၊ ခကျြပွုတျတဲ့အခါမှာ ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှကေိုဆေးခိုငျးတာ၊ လှီးဖွတျပွီးသားလေးတှကေိုအိုးထဲထညျ့ခိုငျးတာမြိုးတှကေို ပါဝငျကူညီစခွေငျးအားဖွငျ့ စားခငျြစိတျကိုအထောကျအကူဖွဈစနေိုငျပါတယျ။
ကလေးက ဓားတှလေိုမြိုးခြှနျထကျတဲ့အရာတှကေိုအန်တကငျးကငျးကိုငျနိုငျတဲ့အရှယျရောကျရငျ ကူပွီးတော့ လှီးခိုငျးဖွတျခိုငျးလို့ရပါတယျ။
5. သှားရညျစာအနနေဲ့လညျး ဟငျးသီးဟငျးရှကျလေးတှကေိုစားခငျြစားဖှယျလုပျကြှေးပါ။
သှားရညျစာအနနေဲ့ ကနျြးမာရေးနဲ့မညီတာတှကြှေေးမယျ့အစား ဟငျးသီးဟငျးရှကျလေးတှကေိုစားခငျြစဖှယျလုပျကြှေးမယျဆိုရငျလညျး ကလေးတှကေ ဗိုကျဆာလာတဲ့အခါမှာ ဟငျးသီးဟငျးရှကျစားကငျြ့ရသှားပါလိမျ့မယျ။
6. အရသာမြိုးစုံ၊ အရောငျစုံတဲ့ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှကေိုကြှေးပါ။
အရသာ၊ ပုံစံ၊ အရောငျမြိုးစုံရှိတဲ့ဟငျးသီးဟငျးရှကျလေးတှကေိုရှေးကြှေးပါ။ ကလေးကဒီလိုဆိုရငျပိုပွီးစိတျဝငျစားလာမှာပါ။ ဟငျးသီးဟငျးရှကျအသဈတဈခုခုကြှေးတဲ့အခါမှာ သူကွိုကျတဲ့အစားအစာနဲ့အတူကြှေးတဲ့အခါမှာလညျးကလေးအာရုံစိုကျမှုနညျးစပေါတယျ။ ပွီးတော့ အရသာရှိဖို့လညျးလိုပါသေးတယျ။ အငျတာနကျကနကွေညျ့ပွီးတော့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျလေးတှကေို မကျြနှာပုံစံ၊ အရုပျပုံစံလေးတှပေုံဖျောပွီးကြှေးရငျလညျး ကလေးငယျလေးတှရေဲ့ စိတျဝငျစားမှုကိုပိုရစနေိုငျပါတယျ။
7. ဟငျးသီးဟငျးရှကျကို ကလေးကွိုကျတဲ့ဟငျးလြာထဲမှာရောခကျြကြှေးလို့ရပါတယျ။
ဟငျးသီးဟငျးရှကျခညျြးပဲကြှေးတာမြိုးမဟုတျဘဲနဲ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျကို ကလေးကွိုကျတတျတဲ့ဟငျးထဲမှာရောပွီးခကျြကြှေးတာကလညျး နညျးတဈမြိုးပါပဲ။
ဖွဈနိုငျရငျတော့လညျးကလေးက ဟငျးသီးဟငျးရှကျကိုကွိုကျလာအောငျ သူ့ရဲ့မူလပုံစံအတိုငျးကြှေးတာကတော့အကောငျးဆုံးပါ။
သားသားမီးမီးတို့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျမြိုးစုံစားပွီးတော့ ရောဂါတှကေငျးစငျကွပါစေ။
သင့်ကလေးငယ်ရဲ့ အနာဂတ်ကို ဖျက်ဆီးချင်ပါသလား ... ဒါဆိုရင် သင့်ကလေးငယ်ကို နေ့စဉ် ဖုန်းပေးကိုင်လိုက်ပါ
၂၄.၅.၂၀၁၉ | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
ယနေ့ခေတ် မိဘများအနေဖြင့် မိမိတို့ကလေးငယ်များကို ဖုန်းများ အလွယ်တကူ ပြသတတ်ကြပါတယ်။ ငိုယိုဂျီကျနေသော ကလေးငယ်များအား ဖုန်းထဲမှ သီချင်းများပြပြီး အငိုတိတ်အောင် ပြုလုပ်လာကြတာ ခေတ်ရေစီးကြောင်း တစ်ခုလိုပင် ဖြစ်နေပါပြီ။ ထိုသို့ ပြသခြင်းကြောင့် ကလေးငယ်များရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ကြီးမားစွာ ထိခိုက်စေပါ...
ကလေးများနှင့် ညဘက်အိပ်နေရင်း အသက်ရှူရပ်ရပ်သွားခြင်း
၂၃.၅.၂၀၁၉ | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
OSA (or) Obstructive Sleep Apnoea (ညဘက်​အသက်​ရှူ ရပ်​ရပ်သွားတဲ့​​ရောဂါ) ဟာ လူကြီး​တွေမှာ အဖြစ်​များ​ပေမယ့်​ က​လေး​တွေမှာလည်း ဖြစ်​တတ်​ပါတယ်​။ က​လေး​တွေမှာဖြစ်​ခဲ့ရင်​ သင်​ယူမှု၊ အမူအကျင့်​၊ ကြီးထွားမှုနဲ့ နှလုံးပြဿနာ​တွေကို ဖြစ်​​စေနိုင်​ပါတယ်​။